Angona Boky Vaovao Hoan’ny Ankizy Manaisotra Ny Hevitrao Momba Ireo Printsesy · Global Voices teny Malagasy
Angona Boky Vaovao Hoan'ny Ankizy Manaisotra Ny Hevitrao Momba Ireo Printsesy
Voadika ny 10 Oktobra 2015 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, русский, Italiano, Deutsch, 日本語, Esperanto , عربي, Español
Printsesy mifampitana amin'ny Vehivavy miavaka. Tantara nanome aingam-panahy avy amin'i Frida Kahlo sy Violeta Parra.
Nanatontosa angona bokin'ankizy mitondra ny lohateny hoe “Anti-Printsesy” ny trano famoaham-boky Arzantina Sudestada izay manasongadina ireo mpilalao fototra lehibe roa: ilay Meksikana mpanao hoso-doko, Frida Kahlo sy ilay Shiliana mpamoron-kira Violeta Parra.
Tsy mbola nonina tao anaty lapa mihitsy ireo fanorovavy amin'ireo tantara ireo na hoe miandry printsy mahafatifaty hoavy sy hamonjy azy ireo ihany koa. Ny zavatra tokana iraisan'izy ireo dia Amerikana Latinina afa-nandositra ny sary [ijerena ny vehivavy] tamin'ny tamin'ny androny izy ireo.
Nilaza i Nadia Fink, mpanoratra ireo asa voaravaka an-tsary ireo fa mampiseho fifangarihana lavorary amin'ny tantaran'ny printsesy eoropeana ireo olo-malaza avy amin'ny tantara Amerika Latina ireo:
Mijanona ho Amerika Latinina hatrany ireo Anti-printsesy satria nanapa-kevitra hilaza ny tantaran'ny Amerika antsika, ao amin'ny kaontinanta mihazona ny fihetseham-pontsika hisosa amin'ny fanoherana izany ary manome antsika ny mari-panondroana antsika. Niezaka ny hanohitra azy ireo hampifangarika kely amin'ny tantaran'ny printsesy ao Eoropa izahay, izay mifanalavitra amin'ny kolontsaintsika sy ny tontolontsika.